na-emebi iwu | Apg29
Ka onye ọ bụla duhie unu n'ụzọ ọ bụla.
Onye na-abịa bụ ọrụ Setan na-eme na akwa odudu, na ụgha niile ihe ịrịba ama na ebube, na n'ajọ omume nile seductions n'etiti ndị na-ala n'iyi, n'ihi na ha natara abụghị ịhụnanya nke eziokwu ahụ, nke na ha nwere ike na-azọpụta.
A nzuzo kọwara
Lee, m na-agwa gị ihe omimi: Anyị ga bụghị ihe niile na-ehi ụra [anwụ], ma anyị niile ga-agbanwe, Na a oge, na ntabi anya, na-afụ opi ikpeazụ. N'ihi na opi ga-ajụta na ndị nwụrụ anwụ ga-akpọlitekwa apụghị ire ure, anyị ga-agbanwe.
Ma m ga-adịghị, umu-nnam, ka unu ghara ịma ihe banyere ndị dara n'ụra [nwụrụ], ka unu ghara iwe iwe dị ka ndị ọzọ na nke na-enweghị olileanya [na-adịghị zoputara]. N'ihi na ọ bụrụ na anyị kwenyere na Jizọs nwụrụ ma bilie ọzọ, otú ahụkwa ka Chineke ga-eme ndị dara n'ụra Jesus ya.
N'ihi na nke a anyị na-agwa unu site n'okwu Jehova, na anyị nke dị ndụ ma na-anọgide na-abịa nke Jehova, ihe ọ bụla ga-abịa n'ihu ndị dara n'ụra [nwụrụ]. N'ihi na Jehova n'onwe ya ga-ịgbada heaven na a na-enye nkpu, were olu onyeisi ndị mmụọ ozi na na opi oku nke Chineke, na mbụ na ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebili.
Mgbe ahụ anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu ọnụ na ha na n'ígwé ojii izute Onyenwe anyị na ikuku. Ya mere, anyị ga-enwe mgbe nile na Jehova.
Ya mere na-akwado ibe okwu ndị a.
Times na oge a kara
Ma ọ bụrụ na oge na mgbe a kara aka, ụmụnna, ọ dịghị mkpa na-edetara unu. N'ihi na unu maara nke ọma na ụbọchị Jehova na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Ya mere, mgbe ha na-ekwu, Udo na ntukwasi-, mgbe ahụ, na-abịa ọdịda ha na mberede dị ka födslosmärtan nke a nwaanyị-aga ịmụ nwa, na ha agaghi-gbapụ.
Ma unu onwe-unu, umu-nnam, anọghị n'ọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ na-eru gị dị ka onye ohi. Na unu niile bụ ụmụ nke ìhè na ụmụ nke taa. Anyị na-abụghị nke abalị, ma ọ bụ ọchịchịrị.
Ya mere, ka anyị ghara ụra dị ka ndị ọzọ, ma ka anyị na-ekiri na-na anya doro. N'ihi na ndị na-ehi ụra, ha na-ehi ụra n'abalị, na ndị na-ókè ókè n'abalị.
Ma, anyị bụ ụmụ nke ehihie kwesịrị inwe anya udo, na-eyi uwe na okwukwe na ịhụnanya yiri ihe mgbochi obi, olileanya nke nzọpụta dị ka okpu agha. N'ihi na Chineke abụghị inye anyị iwe, kama inweta nzọputa site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, bụ onye nwụrụ n'ihi anyị ka anyị wee dị, ma anyị na-ekiri ma ọ bụ na-ehi ụra, na-ebi ndụ ya.
Ya mere, nkasi obi onye ọzọ na uppbygg ọzọ, dị ka ị na-eme.
Ghara ida jụụ
Ma anyị na-arịọ unu, ụmụnna, banyere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na anyị ji ezukọta si Ya, na ị na-adịghị ngwa otú ahụ, adịkwa ya isi na-aghọ egwu, ma site na mmụọ nsọ ma ọ bụ site na okwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla akwụkwọ ozi, dị ka ọ na-zitere site na anyị dị ka ọ bụ ezie na ụbọchị nke Kraịst dị nso.
Ka onye ọ bụla duhie unu n'ụzọ ọ bụla. N'ihi na ụbọchị ga-, ma n'efu [aga ịsụgharị "ọpụpụ"] esesịn a mere, na nwoke nke mmehie, nwa adiana ke adiana, ka e kpugheere, nke bụ onye iro na ebuli onwe ya elu karịa ihe ọ na-akpọ Chineke ma ọ bụ na-efe ofufe, nke mere na ọ na-anọ ala na ụlọ nsọ Chineke dị ka Chineke, na-azọrọ na ha na Chineke.
Ị na-echeta na m gwara gị na nke a, mgbe m na ka ị na? Na ugbu a na ị maara ihe na-egbochi ka o wee mbụ-ekpughe n'oge nke ya. N'ihi na ihe omimi nke mmebi iwu bụ ugbua na-arụ ọrụ, kama ọ bụ naanị ruo mgbe onye a na-egbochi wepụrụ. Ma mgbe ahụ ga-ahụ, iwu onye na-ekpughe, ọ onye Jehova ga-egbu ya na mmụọ nke ọnụ ya na-ebibi site na anya nloghachi.
Na n'ihi nke a, Chineke ga-eziga ha ike ịmụ anya arọ nrọ, na ha kwesịrị ikwere ụgha, na ha ga-ekpe ikpe, ndị nile na-adịghị kweere eziokwu ahụ ma nwere ha obi ụtọ na ajọ omume.
1 Cor 15: 51-52, 1 Nke 4: 13-18, 1 Nke 5: 1-11, 2 Nke 2: 1-12